Ulwazi lweNdwendwe ye-elektroniki yeIndiya (India eVisa)
Iindaba kunye neeNkcukacha zoBandwendweli
I-Visa yaseIndiya yabahambi beshishini (i-eBusiness Indian Visa)
Kwixa elidlulileyo, ukufumana iVisa yaseIndiya kungqineke kungumsebenzi ocel'umngeni kwiindwendwe ezininzi. I-Visa yeshishini lase-India ibe ngumngeni ngakumbi ukufumana imvume kune-Visa yoKhenketho yeIndiya eqhelekileyo (iTourist India Visa). Oku kwenziwe lula ngoku kube yinkqubo ethe ngqo kwimizuzu emibini kwi-intanethi ngokusebenzisa ubuchwepheshe bokusebenzisa ubuchwepheshe, ukudityaniswa kwentlawulo kunye nesoftware ebuyayo.
Yonke inkqubo ngoku ikwi-intanethi ngaphandle kokunyanzela umhambi ukuba ashiye ikhaya okanye iofisi yakhe.
Qhubeka nokufunda ....
Yeyiphi imihla ekhankanyiweyo kwiVisa yakho yaseIndiya okanye eIndiya Visa yaseIndiya (eVisa India)
Zintathu iintsuku ezisebenza kwi-Visa yakho yase-Indiya oyifumana ngekhompyutha, e-India eVisa okanye eTA (iGunya lokuhamba nge-elektroniki).
Umhla wokukhutshwa kwe-ETALo ngumhla apho urhulumente wase-India wakhupha i-Visa yase-India.
Umhla wokuphelelwa kwe-ETALo mhla uthetha umhla wokugqibela ekufuneka umnini weVisa angene eIndiya.
Usuku lokugqibela lokuhlala eIndiya: Ayikhankanywanga kwi-Visa yakho ye-elektroniki. Kubalwa ngamandla ngokusekwe kumhla wokungena kwakho eIndiya kunye nohlobo lweVisa.
I-Visa kaNgxamiseko yeIndiya (Ngxamisekileyo iVisa yaseIndiya) inokusetyenziswa koku website ngayo nayiphi na imfuno ekhawulezileyo nengxamisekileyo. Oku kungasweleka kusapho, ukugula okanye isihlobo esisondeleyo okanye ubukho obufunekayo enkundleni.
Urhulumente waseIndiya Uyenzile lula into yokuba uninzi lwezizwe zifake isicelo kwi-Visa yaseIndiya ekwi-Intanethi (eVisa India) egcwalisa iFom yesicelo seVisa eIndiya kwi-Intanethi ngeenjongo zokhenketho, ushishino, ezonyango kunye nenkomfa.
Izizathu ezili-16 zokuba kutheni i-eVisa India isala | Isikhokelo sokuthintela ukwaliwa
Kuya kufuneka ube neziphumo ezilungileyo kutyelelo lwakho lwaseIndiya. Esi sikhokelo siya kukunceda ekufumaneni iziphumo eziphumelelayo zesicelo sakho se-Indian Visa Online (eVisa India) ukuze uhambo lwakho lube noxinzelelo. Ukuba ulandela esi sikhokelo ke amathuba okulahlwa aya kuncitshiswa kwisicelo sakho se-Visa se-Intanethi esenzelwe wena Faka isicelo kwi-Intanethi apha.
I-India Visa yeemfuno zeFoto
Kuya kufuneka wazi ukuba ukufumana iVisa yaseIndiya kwi-Intanethi (eVisa India) kufuna iseti maxwebhu a xhasayo. La maxwebhu ahlukile ngokuxhomekeke kwifayile ye- Uhlobo lwe-Visa yaseIndiya uyasebenza.
I-India Visa Passport Scan iimfuno
Ukuba ugcwalisela nayiphi na Iindidi zeVisa zaseIndiya, ubuncinci kufuneka ulayishe ipasipoti yakho ye-India yeVisa ekwi-intanethi (eVisa India) kule webhusayithi. Ikhonkco lokulayisha ipasipoti yakho uyifumana emva kokuba intlawulo yenziwe ngempumelelo kwaye iqinisekisiwe sithi. Iinkcukacha ezongezelelweyo apho amaxwebhu ayimfuneko kwiintlobo ezahlukeneyo zeVisa yaseIndiya zichaziwe apha. La maxwebhu ahlukile ngokuxhomekeka kuhlobo lweVisa yaseIndiya oyifaka isicelo.
Iindawo ezi-5 eziPhambili zokuNdwendwela eIndiya
Sicinga ukuba ukuba ufunda eli nqaku, wenza uphando ezixekweni nakwiindawo zabakhenkethi ekufuneka i-India ibonelele ngazo. I-India ine-tapestry etyebileyo kunye neentlobo ngeentlobo, akukho ndawo inqongopheleyo yokundwendwela. Ukuba ungumphambukeli ofunda le nto, kuya kufuneka uqale ufake isicelo se Visa ye-elektroniki ye-Indiya, emva kokujonga ukuba niyadibana na Imfuno yeVisa yaseIndiya.
Masingene kwiindawo eziphezulu ezi-5 zabakhenkethi eIndiya ukulungiselela iindwendwe.
Ngaba i-Visa yase-India ingavuselelwa okanye yandiswe- Isikhokelo esipheleleyo
Urhulumente waseIndiya uyithathile inzaliso ebonelelwe ngabakhenkethi kuqoqosho lwaseIndiya ngokungathí sina, kwaye ke wenza iiklasi ezintsha zeIndiya Visa iintlobo, kwaye ukwenze kwalula ukufumana i IVisa yaseIndiya kwi-Intanethi (eVisa India). Umgaqo-nkqubo weVisa waseIndiya uguquke ngokukhawuleza kulo nyaka kunye ne-eVisa India (nge-elektroniki yeIndiya Visa kwi-Intanethi) eyafikelela kwelona cebo lilula, kulula, nelikhuselekileyo kwi-Intanethi lokufumana iVisa yaseIndiya uninzi lwabantu bamanye amazwe. Uqoqosho lwaseIndiya luyaqhubeka nokukhula kwiinkonzo, kumacandelo ezorhwebo nakwezolimo. Ukhenketho eIndiya yintsika yokuhluma.
Ingcaciso yegama elifunwayo malunga neVisa yaseIndiya ekwi-Intanethi (eVisa India)
Ukuba ucwangcisa ukutyelela e-India, ke lelona hlobo lulula lokundwendwela e-India ukufaka phakathi kwazo zonke Iindidi zeVisa zaseIndiya Ezifumanekayo yi-Indian Visa Online (eVisa India). Inkqubo ye- Ifomu yesicelo seVisa yaseIndiya ifuna impendulo kwinxalenye yesibini yombuzo ongenakushiywa ungenanto, malunga nesalathiso e-India, ngamanye amagama ngumbuzo onyanzelekileyo kwi Isicelo seVisa saseIndiya. Kulesi sihloko singathanda ukucacisa inani lamathandabuzo abahambi baseIndiya abanayo ngexesha lokufayishwa kwevisa kunye nenkqubo yokwenza isicelo.
Igama ekubhekiswa kulo kwilizwe lasekhaya lifuna impendulo kwi-Indian Visa Online (eVisa India)
Uyacelwa ukuba wenze isicelo se-elektroniki Indian Visa ekwi-Intanethi, uhlobo olulula lwe-visa ngaphakathi Iindidi zeVisa zaseIndiya.
Omnye wemibuzo ekwi-Indian Visa Fomu yesicelo efuna impendulo enyanzelekileyo, le mpendulo ayinakushiywa ingenanto, inxulumene negama lesalathiso kwilizwe lasekhaya, oku kufuna igama lomntu omaziyo ngelixa ugcwalisa Isicelo seVisa saseIndiya. Kule posti, uya kunikwa iimpendulo ezicacileyo kwimibuzo ephakanyisiweyo kwesi sihloko ukuze ukwazi ukuphendula ngokucacileyo kwaye ube namava alula okuzalisa. Ifomu yesicelo seVisa yaseIndiya.
Yonke into oyifunayo kufuneka uyazi malunga ne-Indian Rupee kunye neMali
Imali eqeshwe eIndiya yirupiya yaseIndiya (₹). Inkqubo ye- I-Indian Rupee yimali evaliweyo Oko kuthetha ukuba iRupees ayinakuthengwa ngaphandle kweIndiya Kukho izithintelo malunga nokuba ingakanani na into enokuthatyathwa eIndiya . Oku kuthetha ukuba phantse bonke abahambi banakho ukufumana iiRupees zaseNdiya ngokutshintsha imali yabo bakufika eIndiya.
I-URGENT Indian Visa (eVisa India) kunye nesicelo se-Visa ye-India engxamisekileyo
Kukho iimeko apho kufuneka uhambe uye eIndiya kwaye kufuneka ufumane visa e-India ngexesha likaxakeka. Oku kungabangelwa kukugula, ukufa, izizathu zomthetho okanye amanye amaqhina afuna ubukho kwangoko.
Ngaba ikhona iklasi ye-Visa Class engxamisekileyo okanye i-Visa yaseNdiya engxamisekileyo?
Yonke into oyifunayo kufuneka uyazi malunga neemfuno zeVisa zaseNdiya zokuhamba ngenqanawa
Urhulumente waseIndiya yenze kwalula kakhulu kubahambi ngeenqanawa zokuhamba ngenqanawa ukuba baphonononge kwaye bonwabe eIndiya. Unokufumana malunga nazo zonke i-Indian Visa Online (eVisa India) iimfuno zoku website. Ukuhamba kukhenketho olonwabisayo, ukuba olu lonwabo luxutywe nokhenketho lwenqanawa yokuhamba ngenqanawa, emva koko unokufuna ukuphonononga i-India xa inqanawa yokundwendwela inqanawa kwizibuko lase-India.
Ukufika kweVisa yabakhenkethi eIndiya kwisikhululo seenqwelomoya i-Indira Gandhi
Ezona zibuko liqhelekileyo lokungena kubakhenkethi bamanye amazwe abaya eIndiya yidolophu elikomkhulu laseIndiya eNew Delhi. Isikhululo seenqwelomoya saseIndiya iNew Delhi kwisikhululo seenqwelomoya sibizwa ngokuba yi-Indira Gandhi International uwanja sokumisa inqwelomoya. Esona sikhululo seenqwelomoya esixakeke kakhulu eIndiya, abakhenkethi banokufikelela kuyo ngeteksi, imoto kunye nomgaqo kaloliwe.
Kufuneka ubone iindawo eJaipur zabakhenkethi
IJaipur, ekwabizwa ngokuba sisiXeko sasePinki saseIndiya, yindawo apho isiko kunye nexesha langoku lihlangana kumanyano olugqibeleleyo. Yidolophu yesixeko yanamhlanje eyiyeyayo ngobomi obuxakekileyo kodwa kwangaxeshanye ikwafaka ikhubalo lakudala kunye nobutyebi beRajasthan ukuba ikomkhulu layo. IJaipur iya kubonelela ngamava okuntywiliselwa okuba kukwisixeko sanamhlanje esikwanxibelelene ngokunzulu nembali yakudala yexesha likaRajput elibonisa iinqaba zalo zobukhosi. Olu dibaniso lukhethekileyo ngokuyinxalenye lwenza ukuba iJaipur ibe yindawo edumileyo phakathi kwabakhenkethi bamanye amazwe abatyelele eIndiya. Kwaye ngenxa yokuba ithandwa kakhulu ngabakhenkethi ikwayindawo yokuxhotyiswa ukubonelela ngendawo yokuhlala entle kubakhenkethi bayo ngelifa labo elihle kunye neehotele ezintlanu zeenkwenkwezi. Kwangelo xesha, abo bafuna ukuphonononga isixeko kuhlahlo-lwabiwo mali olunje banokwenza ngokulula kwaye bonwabele amava. Kuzo zonke iindawo onokuzibona kunye nezinto onokuzenza xa uketyelele eJaipur, nazi izinto ekufuneka uzenzile kwaye uzenze.
Kufuneka ubone iindawo eDelhi kubaKhenkethi
Njengekomkhulu laseIndiya, iDelhi inembali enomdla kwaye isitampu kuso sonke isixeko. Isuka e Ixesha le-Mughal ukuya kumaxesha okoloniyali ukuza kuthi ga kulo mhla, ingathi esi sixeko sigqunywe ngamanqanaba embali. Yonke indawo eDelhi inebali elinokubaliswa, elowo ebalisa ibali elahlukileyo nelohlukeneyo
Iholide kwiiAndaman naseNicobar Islands kubakhenkethi baseIndiya
Kungenzeka ukuba uthathe isigqibo sokundwendwela eIndiya I-Visa yabakhenkethi yaseIndiya, I-Visa yeshishini laseNdiya or I-Visa yezonyango yaseIndiya, kodwa ukuba uza njengoKhenketho emva koko, enye yezona ndawo zintle kakhulu yiholide eAndaman naseNicobar Island. Ukuba umfanekiso wase-Indiya onayo entlokweni yakho ubunjwe ngamathafa ashushu kunye namandulo, amatye ezikhumbuzo e-rustic, awungekhe uqhubeke nenyaniso. Ngelixa ngokuqinisekileyo iyinxalenye yeIndiya, kwaye uninzi lwabakhenkethi bezithintela ukuba bangaboni ngaphezulu kweli candelo, into emnandi ngeIndiya yile I-India yenziwa ngaphaya kohlobo olunye lwendawo yomhlaba.
Uhambo lwezulu eMunnar, eKerala kubakhenkethi baseIndiya
Xa iKerala kubhekiswa kuyo njengelizwe likaThixo uqobo kungenxa yeendawo ezinjengeMunnar, eyidolophu encinci ekwisithili saseIdukki kwaye yenye yezona ndawo zintle zaseIndiya. Incinci yeKerala, kunye ne-microcosm yohlobo, esi sikhululo senduli sihle  I-Western Ghats ekuphakameni kwe-6000 ft. Yidolophu encinci ezolileyo eneentaba ezintle kunye neenduli, amahlathi aluhlaza, amasimi eti kunye nekofu, ukubuyela kwezilwanyana zasendle, kunye nokuhlaza okujikelezileyo
Isikhokelo somhambi waseVisa abakhenkethi abakhokela kuhambo loololiwe eIndiya
Ukuhamba e-India kwaye unikele ubungqina ngendyebo yayo ecebileyo, eyahlukileyo kunye nobomi bemihla ngemihla kuloliwe ngamava anjengeminye. Ukuhamba ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye ku I-Indiya ibingayi kukuhlawulela kuhlobo lwaseIndiya oya kuthi ulubone udlula kuwe ngelixa uloliwe. Ukuphucula la mava kubakhenkethi abatyelele eIndiya kukho Oololiwe abakhethekileyo abanobunkunkqele e-Indiya kwakuthetha ngokukodwa ukunika abakhenkethi amava awodwa okuziyolisa kwesiko lobukhosi elidlulileyo. Aba loliwe baseIndiya babakhenkethi bahamba ngololiwe a inqabile, ayilibaleki.